China GRP Pultruded Fibreglass Fom Ulwakhiwo fiberglass Tube Ulwakhiwo zu iCandelo Pultrusion Icandelo / iProfayili mveliso kunye nabenzi | IBonai
I-Pultrusion yinkqubo eqhubekayo kusetyenziswa ukuqiniswa kwefayibha nge-thermosetting resin matrices. Izinto zokonyulwa ezikhethwe kwangaphambili, ezinje nge-fiberglass roving, imethi, amalaphu alukiweyo okanye ilaphu elithungiweyo, zitsalwa kwindawo yokuhlambela intlaka apho zonke izinto zifakwe kwilitye le-resin engamanzi. Ii-resins eziqhelekileyo zibandakanya ii-polyesters, ii-vinyl esters kunye neephenolics. Ifayibha emanzi-ngaphandle yenziwe ngobume obunqwenelekayo bejiyometri kwaye yatsalwa yintsimbi eshushu. Nje ukuba ungene ngaphakathi ekufeni, unyango lwentlaka luqaliswa ngokulawula ubushushu obuphezulu obuchanekileyo. I-laminate iyaqina kubume bendawo yokufa, njengoko iqhubeka itsalwa ngumatshini we-pultrusion. Uninzi lwalo naliphi na icandelo elinqamlezileyo linokubhalwa.
Iiprofayili ezigqityiweyo ze-GRP zibonelela ngamandla akhethekileyo, ubunzima kunye nokungaguquguquki. Iipultrusions zibonelela ngenani lezibonelelo ngaphezulu kwemathiriyeli yesintu enje ngentsimbi, ialuminiyam kunye nemithi kunye nokusetyenziswa kwazo kuyanda kuluhlu olubanzi lwezicelo kunye namashishini.
Uhlobo olungenasiphelo lweeProfayili zeGRP eziPhambili zivumela inqanaba eliphezulu lenkululeko yoyilo. Iipropathi ezilungelelanisiweyo ezinje ngamandla, ukuqina, ubunzima kunye nombala zinokuyilwa ngokuyilwa kwemveliso kwinqanaba lokuqala lophuhliso.
Iindlela zokuhamba kunye namaqonga
Amaqonga ezemigodi naweshishini
Ukusetyenziswa kolwandle - umz. Ii-marinas, iijetys kunye nokugcwala
Umsele wamanzi ugubungela
Amaqonga oshishino lweKhemikhali kunye neendlela zokuhamba
Amanzi / Unyango lwamanzi amdaka
Amaqonga kunye neendlela zokuhamba apho kufuneka khona iipropathi ezingezizo ezombane nezishushu
I-fiberglass (i-Fiberglass) yinto engeyiyo yentsimbi engaqhelekanga kunye nokusebenza ngokugqwesileyo. Ineentlobo ngeentlobo zeenzuzo. Izinto eziluncedo kukugquma kakuhle, ukumelana nobushushu okuqinileyo, ukumelana nokulungela ukubola, kunye namandla oomatshini aphezulu, kodwa izinto ezingalunganga kukuqaqamba kunye nokuthamba okunqabileyo. Umahluko. Yenziwe nge-pyrophyllite, isanti ye-quartz, ilitye lekalika, i-dolomite, i-boronite, kunye ne-boronite njengezinto ezingafunekiyo ngokunyibilika kobushushu obuphezulu, ukuzoba, ukujija, ukuluka kunye nezinye iinkqubo. Ububanzi be-monofilament yayo buninzi be-micrometer ukuya kwi-micrometer engaphezulu kwamashumi amabini, elingana ne-1 / 20-1 / 5 yomtya weenwele, umtya ngamnye wefayibha uqukethe amakhulu okanye amawaka e-monofilaments. Ifayibha yeglasi ihlala isetyenziswa njengesixhobo sokuqinisa kwizinto ezidityanisiweyo, izixhobo zokufakelwa kombane kunye nezinto zokufudumeza ubushushu, iibhodi zesekethe kunye neminye imimandla yoqoqosho lwesizwe.
Egqithileyo Izinto Zokwakha U Umjelo weNsimbi oSuka kwiFektri yeProfayili yeNsimbi
Okulandelayo: China Factory Kwenziwe ngentando zu fiberglass nothango for Construction